मजाक - iSearch
तिनीहरू सफल दिनको अन्त्य हुन सक्छन् वा हाम्रो रोजगारीको जीवनमा मात्र एकदम थोडा विशेष क्षण दिन सक्छ: उत्तेजनाहरू। सबैले यसको साथ केहि अन्यलाई जोड्दछन्। उदाहरणका लागि, एक गिलास शराब, चकलेट वा कफीको एक पट्टी।
Stimulants â € "special food
सामान्यतया, उत्तेजनाहरूसँग एक चीज सामान्य छ: तिनीहरू विशेष प्रकारको खानाको भाग हुन् जुन पोषण मूल्यमा ध्यान नगर्ने तर यसको स्वाद र उत्तेजक असरमा। जर्मनीमा, कफीले सबैभन्दा लोकप्रिय उत्तेजक सूचीको सूची दिन्छ। हामी व्यापक पूर्वाग्रहको साथ सफा गर्न खनिज जल - वा बियर भन्दा धेरै कफी खरिद गर्छौं।
तर कुन कुराले कफीलाई हाम्रो लागि धेरै विशेष बनाउँछ?
आज पनि, कैफीनको प्रभावले छलफल गरिरहेको छ। के कफी साँच्चै मद्दत गर्छ वा होइन? के यो डाइरेड्रेट गर्दछ, र के तपाईं वास्तव मा एक गिलास पानी संग हरेक कप कफी को बदलन को आवश्यकता को लागि निर्जलीकरण को रोकन को लागि?
धेरै व्यक्ति गर्भवती प्राप्त गर्न बिहानको कप कफीको खाँचो छ। र यस आक्रमणकारी प्रभाव पनि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छ। किनभने क्याफिन शरीरको आफ्नै दूत एडेनोसिनसँग धेरै नै छ। तथापि, अडिनेसोइन शरीरको थकानलाई संकेतको लागि जिम्मेवार छ। कब्जेर र मस्तिष्कमा केहि रिसेप्टरहरू सक्रिय गरेर, डोपामिन वा नोरपाइनफेरेर जस्ता पदार्थहरूको उत्तेजना प्रभावलाई दबाइन्छ। अर्को क्याफिन, एडिनेसोइन को प्रभावहरु लाई समाप्त गर्दछ। यसले रिसेप्टरहरू कब्जा गर्दछ तर तिनीहरूलाई सक्रिय पार्दैन। यसले सशक्त पदार्थहरूको थ्रॉटललिंग प्रभाव गुमाउँछ र हामी सतर्क रहन्छौं। जबसम्म क्याफिन डगिङबाट एडेनोसिनलाई रोक्छ, कफीमा हामीसँग उत्तेजित प्रभाव छ। यद्यपि नियमित कफी खपत संग, प्रभाव कम हुन्छ। मस्तिष्कले थप रिसेप्टरहरूलाई प्रशिक्षित गर्दछ ताकि आदिनोसिन पनि डक गर्न खोज्छ। कफी मात्र उत्तेजित हुन सक्छ यदि यसलाई नियमित रूपमा उपभोग गरिएको छैन। कुन सुत्ने उपभोक्ताहरूले बिहानको पहिलो कफी कफी पछि अनुभव गर्छन्, अर्कोतर्फ, रातो रात मा सेट निकाल्ने लक्षणहरूको दमन द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यदि क्याफिन को प्रभाव कम हुन्छ, त्यहाँ एडिनोसिन को एक बढि रिलीज छ जसले हामीलाई डोऱ्याउँछ।
वैसे, कफी वास्तवमा ड्रेनिंग प्रभाव छैन। वास्तवमा, यसले वास्तवमा छोटो सूचनामा गुर्देको फिल्टरिंग प्रकार्य बढाउँछ, र यसैले तरल पदार्थको मात्रा घट्यो, तर अनावश्यक मात्रामा। हरेक प्याला कफीको साथ गिलास पानी पिउन कुनै चाहिँदैन।
कुन कुराले कफी खोस्ट बनाउँछ?
हामी जान्दछौ कि कफी कफी रोजगारीको जीवनको भाग हो, र केहि कप एक दिनको समयमा बेकारी रूपमा नराम्रो हुन्छन्। तर के भान्सा कफीले स्वाद अनुभव गर्दछ? कफीको लागि वास्तविक खुशी बन्नको लागि विचार गर्न धेरै छ: उदाहरणका लागि पीस को डिग्री। किनकि यो पानीको कफी मार्फत पानी लिने बेलामा व्यक्तिगत स्वाद सनसनीमा ठूलो प्रभाव छ। राम्रो पीडा, लामो समय सम्म पानी को माध्यम ले प्रवाह गर्न को लागी, यसको साथ अधिक स्वाद लिन्छ। तथ्याङ्क, तथापि, स्वादको कुरा हो: कम स्वादले कफीको स्वाद अधिक बनाउँछ, अधिक स्वाद र अधिक कडा। कफी पाउडरको मात्रा पनि कफीको कटाई र अम्लता को निर्धारण गर्छ। तथापि, सुगन्धमा कफीको आधारभूत आवश्यकता बृद्धि हो। र यो सबै छ! हरी कफीमा पहिले नै उपस्थित स्वादको नग्नताहरू निकाल्नको लागी जस्तै मिट्टी, पोल्ट्री वा फ्रुट नोटहरू, तापमानको बीचमा कम से कम परिष्कृत सम्बन्ध र बरसातको अवधि महत्वपूर्ण छ। यसैले, कफी रोस्टर्सहरू शिल्पकारहरू होइनन् तर साँचो कलाकारहरू मान्दैनन्!
संयोगी, कफी मेमोरी वा एस्प्रेसो मेसिनको खरिदमा ध्यान दिने कुनै पनि कफी प्रेमीले भने, विशेषज्ञहरु अनुसार, अरोमेटिक सर्तहरूमा उत्तम नतिजा मात्र हात-उकालो फिल्टर कफी संग प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यदि तपाईं मेनु बनाइएको कफी विशेषताको स्वादिष्ट आनन्दको विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तपाईले फरक फरक मोडेलहरूको तुलना गर्नु पर्छ। अधिग्रहण लागतहरु को अतिरिक्त, त्यहाँ केहि प्रमुख गुणात्मक अंतरहरु छन्। त्यसैगरी, सबै अन्य लक्जरी वस्तुहरू र तिनीहरूका सामानहरू जस्तै दाखरस अलमारियाँ वा हाइड्रोइजमा लागू हुन्छ।